68/2014 ခုနှစ်,/QH13 ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေနိုဝင်ဘာလ 26 8 ကြိမ်မြောက်မှာ,2014 ခုနှစ်ဗီယက်နမ်၏ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ 8th ကွန်ဂရက်ဇူလိုင်လ 1 ရက်မှအောင်မြင်ပြီး,2015 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ 29 ရက်ကနေထိရောက်တဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်,2005 ခုနှစ်.ထိုလုပ်ငန်းဥပဒေပုဒ်မ 17 ပညတ်တရားကိုပြည့်စုံစေခြင်းနှင့် revises.2005 လုပ်ငန်းဥပဒေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ,2014 လုပ်ငန်းဥပဒေ 10 အခနျးနှင့် 213 ဆောင်းပါးများပါဝင်သည်,41 တစ်တိုးနှင့်အတူ.အပိုဒ် 4,အပိုဒ် 10 နှင့်ပညတ်တရား၏အပိုဒ်2အမှတ်အသားများကထောက်ပံ့ပေး,ပြည်နယ်လုပ်ငန်းများနှင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားလုံးဝအသစ်ဖြစ်ကြ.
2014 ခုနှစ်တွင်,ထိုလုပ်ငန်းဥပဒေ 2005 လုပ်ငန်းဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များဆက်လက်တစ်ချိန်တည်းမှာ,အဟောင်းသည်ပညတ်တရား၏ကန့်သတ်မှုနှင့်ချို့ယွင်းချက်ကိုအစားထိုးနိုင်ရန်အတွက်,သစ်စည်းမျဉ်းအမျိုးသားရေးအလေ့အကျင့်များနှင့်အညီချောမွေ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးဆက်လက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနှင့်ဖြည့်ဆည်းခဲ့.ရလဒ်အနေဖြင့်,ကော်ပိုရိတ်တရားတော်တချို့အခြေခံပညာပြောင်းလဲမှုများကို 2014 ခုနှစ်ရှိပါတယ်,အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
2014 ခုနှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အတူ,2014 Corporate ဥပဒေဖဲကြိုးဖြတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရဲ့ contents ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်,နှင့်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ.ထိုကတည်းက,နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဗီယက်နမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထူထောင်ချင်ကို set up စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတရား၏ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီမှတ်ပုံတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလက်မှတ်ထုတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ရပါမည်.2014 ခုနှစ်တွင်,ထိုလုပ်ငန်းဥပဒေသီးခြားစီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို set up ဖြစ်ပါတယ်.အဆိုပါလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပြည်နယ်စံချိန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းခြင်း၏ပုံစံသည်နှင့်ဈေးကွက်ပူးပေါင်း.ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြပြီမဟုတ်,ထို့ကြောင့်ပညတ်တရားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားဖြင့်ထုတ်ပေးသီးခြားစီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလက်မှတ်၏မှတ်ပုံတင်ကို set up ခဲ့,နှင့် operating လှုပ်ရှားမှုများ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လုပ်ငန်းများလည်ပတ်မှုအခွအေနကြောင်းသေချာစေရန်.
2.တိုက်ရိုက်လုပ်ငန်းအောက်ရှိလုပ်ငန်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(ရုံးခွဲ,ကိုယ်စားလှယ်ရုံး,စီးပွားရေးရာအရပျ).ဖိုင်ရဲ့လက်ခံရရှိပြီးနောက်,စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရဲ့ contents3အလုပ်လုပ်ရက်က5ရက်ကနေလျော့ချနေကြတယ်
အပိုဒ် 26 နှင့်အပိုဒ်3ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ,2014 ခုနှစ်၏လုပ်ငန်းဥပဒေပုဒ်မ 31,စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ယူနစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ဖိုင်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အကြားလိုက်နာမှုမှာကြည့်.စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရဲ့ contents မှတ်ပုံတင်ဖို့နဲ့ထပ်မံစိစစ်တည်းဖြတ်များအတွက်ကာလဖိုင်တွေကိုလက်ခံရရှိကနေ3အလုပ်လုပ်ရက်.ဒါကြောင့် 2005 ခုနှစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဥပဒေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်,ကြည့်ရှုခြင်း,2 အလုပ်လုပ်ရက်လျှော့ချထုတ်ပေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အချိန်.
ရေးသားထားသောသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ဗားရှင်း၏ပုံစံထဲမှာဖော်ပြပါတယ်.2014 ခုနှစ်၏လုပ်ငန်းဥပဒေပုဒ်မ 29 ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များအလိုအရ,စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရဲ့ contents များကိုသာအဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ:စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာမကို,စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွက်,ထိုကော်ပိုရိတ်ဌာနချုပ်လိပ်စာ,စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏မှတ်ပုံတင်ထားမြို့တော်,နှင့်ရှယ်ယာရှင်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို.ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များဥပဒေနှင့်အညီတှငျမှတျတမျးတငျထားပါလိမ့်မည်ဥပဒေကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါသည်,ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေ,မိတ်ဖက်,ကုမ္ပဏီမှအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များအဖွဲ့ဝင်များ.
ထိုကွောငျ့,စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍရဲ့ contents များနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာများအတွက်ဖြည့်စွက်မထားဘူး'ရှယ်ယာရှင်များ့မှတ်ပုံတင်.ဒီအပြောင်းအလဲဟာ operating စက်မှုလုပ်ငန်း၏ပြောင်းလဲမှုနှင့်ပူးတွဲစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ရှယ်ယာရှင်များ၏ပြောင်းလဲမှုနှင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ရှယ်ယာရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောအခါ,စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ရေး၏မှတ်ပုံတင်ထား contents တွေကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့မရှိဘဲလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ဖိုင်ကိုဖြည့်စွက်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ယူနစ်အကြောင်းကြားရကြလိမ့်မည်,ထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၏ထုတ်ပေးရေးအဖြစ်(ထိုလုပ်ငန်းဥပဒေ, 2014 ၏အပိုဒ် 32).ဒါကြောင့်အသီးအသီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ပြောင်းလဲမှုကိုလျှော့ချရန်,စက်မှုလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြည့်စွက်ရန်;သို့မဟုတ်အချိန်နှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုလုပျထုံးလုပျနညျးတစ်ဦးစွန့်ပစ်ဘို့အရှယ်ယာရှင်ဖန်တီးရန်စတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုပြောင်း,ပြန်လည်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေ-ပြဿနာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်.
2014 ခုနှစ်၏လုပ်ငန်းဥပဒေပုဒ်မ 33 ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များအလိုအရ:စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ရေးရဲ့ contents ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါ,စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးအမျိုးသားသတင်းအချက်အလက်ဌာနပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရဦးမည်.ဒီပြောင်းလဲမှု၏အဓိကအချက်ဖြစ်ပါသည်.လက်ရှိစည်းမျဉ်းများအလိုအရ,စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလမ်းကိုထုတ်ဝေဖို့ရှေးခယျြနိုငျ,ကဲ့သို့:အတွက်လုပ်ငန်းသတင်းအချက်အလက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ရိုးရာသတင်းစာများသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်သတင်းစာအမျိုးမျိုးတွင်မှတ်ပုံတင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်3နှစ်ဆက်တိုက်ဖော်ပြခဲ့သည်.
အပိုဒ် 18 နှင့်အညီ,အပိုဒ် 2,အချို့ကိစ္စများတွင်,တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ထားသောလုပ်ငန်းထူထောင်တဲ့အခါ,မှတ်ပုံတင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်တရားစီရင်ရေးကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဆပ်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ထားသူကိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်.ဤသည်ကို 2014 ခုနှစ်ကော်ပိုရေးရှင်းတရားသစ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်.ဒါကြောင့်မှတ်ပုံတင်ဖိုင်ရဲ့ထူထောင်ရေးအတွက်တရားစီရင်ရေးကိုယ်ရေးရာဇဝင်အချက်အလက်များကိုရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပေမဲ့,စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏တည်ထောင်ပြီးအချိန်တိုးမြှင့်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များပေးဆောင်နှင့်အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ထမ်းရသောဝန်တိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်,နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်.အဆိုပါပတ်ဝန်းကျင်တစ်အနုတ်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်.
အပိုဒ် 13 ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ(2)အ Entrepreneurship အက်ဥပဒေ 2014:ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးတွဲ-စတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတွေကတရားဝင်ကိုယ်စားပြုထားသူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အများအပြားကိုယ်စားလှယ်များရှိစေခြင်းငှါ.ဒါကြောင့်,2005 ကော်ပိုရေးရှင်းတရားမတူဘဲ,2014 Corporate ဥပဒေကုမ္ပဏီကတစ်ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်ဆုံးဖြတ်ရန်အပြည့်အဝတတ်နိုင်သို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေး,အချို့ကိစ္စများတွင်,ကုမ္ပဏီရဲ့အများအပြားဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်များရှိပါတယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်,ဂဏန်း,စီမံခန့်ခွဲမှုခေါင်းစဉ်နဲ့ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေကိုယ်စားလှယ်များ၏လိုင်စင်နှင့်တာဝန်ကုမ္ပဏီ၏စည်းမျဉ်းများအတွက်သတ်မှတ်သောခံရကြလိမ့်မည်.
ဖြည့်စွက်ကာ,အပိုဒ် 13 ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ,အပိုဒ် 7,2014 ခုနှစ်၏လုပ်ငန်းဥပဒေ:အချို့သောအထူးကိစ္စများတွင်,တရားရုံး၏တရားစွဲဆိုမှုစဉ်အတွင်းဥပဒေကြောင်းအရကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ဖို့အခွင့်အာဏာရှိပါတယ်.
2014 ခုနှစ်၏လုပ်ငန်းဥပဒေပုဒ်မ 44 ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များအလိုအရ,စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်,အရေအတွက်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတံဆိပျ၏အကြောင်းအရာ.တံဆိပ်ခတ်အသုံးမပြုမီ,ကုမ္ပဏီ၏မူရင်းတံဆိပျကို mode ကို၏မှတ်ပုံတင်ထားသောယူနစ်ကိုအကြောင်းကြားရမယ်,အမျိုးသားရေးသတင်းအချက်အလက်ပေါ်တယ်အများပြည်သူအပ်လုဒ်ကို၏လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ထဲမှာ.
ထိုကွောငျ့,ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတံဆိပျ၏သစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြစ်ပါသည်,ထိုပြဿနာကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းခဲ့ဖြစ်စေမ,ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနည်းလမ်းများနှင့်အတူ.ရှေ့မှာ,ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနအဘို့အကော်ပိုရိတ်တံဆိပျ၏အသုံးပြုမှုများ၏ပြဿနာ,အခုဆိုရင်,ဥပဒေနှင့်အညီ 2014 ခုနှစ်ကော်ပိုရေးရှင်းသည်ပညတ်တရားလုပ်ငန်းများအရသိရသည်ကော်ပိုရိတ်တံဆိပျ၏ပုံစံကိုဆုံးဖြတ်ရန်,အရေအတွက်နဲ့ content.Enterprises မှသာမူရင်းတံဆိပျကို mode ကို၏လည်ပတ်မှုယူနစ်အကြောင်းကြားရန်,အမျိုးသားကဏ္ဍအများပြည်သူအပ်လုဒ်ကို၏လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်တွင်မှတ်ပုံတင်.ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းမရှိဘဲဒုက္ခမပါဘဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှအထောက်အကူဖြစ်ပါသည်.အီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်မှုနည်းစနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလမ်းကြောင်းသစ်အဆိုအရ,တံဆိပ်ခေါင်းတံဆိပျကိုအောက်ပါအတိုင်းများအသုံးပြုခြင်း-ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတက်အားနည်း.ထိုကွောငျ့,တံဆိပ်ခတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံတကာလမ်းကြောင်းသစ်မှဿုံသင့်တော်ပါတယ်.လက်ရှိအချိန်မှာ,အချို့သော codes တွေကိုအတွက်ကော်ပိုရိတ်တံဆိပျကိုလည်းကုန်သွယ်စည်းမျဉ်းတစ်အရေအတွက်ဘောငျ,လုံးဝဖယ်ထုတ်လိုက်လျှင်ကြီးမားသောအလုပ်မှဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်,အနီးကပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအာမခံချက်မပါဘူး.
2014 ခုနှစ်အက်ဥပဒေကကုမ္ပဏီ၏ဆွဲသွင်းပါဝင်၏နိယာမကြောင်းဖော်ပြထားသည်'s ကိုမြို့တော်က virtual မြို့တော်၏ status နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်,ယခုပင်ဖြစ်၏အဖြစ်ဒါပေမယ့်ကုသသည်မဟုတ်.အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကန့်သတ်ကုမ္ပဏီ၏သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုပါရန်ဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည်,မှတ်ပုံတင်ထားသောမြို့တော်လျှော့ချရန်ပူးတွဲစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတစ်ခု.
2014 ခုနှစ်နှစ်တွင်,ထိုလုပ်ငန်းဥပဒေကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ဖက်စပ်မြို့တော်သက်တမ်းမွေးစားခဲ့သည်.ထိုဖက်စပ်၏သက်တမ်းကိုလျော့ချရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.ပိုင်ရှင်နှင့်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီ၏အဖွဲ့ဝင်တဦးအဘို့,ဒါကြောင့် 90 ရက်အတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့်စစျဆေးဖို့လုံလောက်သောဖြစ်ရပါမည်(စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၏ထုတ်ပေးရေးမှ).ထိုသို့သောအခါ, ထိုကန့်သတ်ကုမ္ပဏီ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှကတိကဝတ်များနှင့်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီ၏နှစ်ခုအဖွဲ့ဝင်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအဖြစ်'လက်ရှိဖက်စပ် 36 လထက်မပိုပါဘူး့.
65 ကနေနိုင်ငံတကာအဆင့်အလေ့အကျင့်အတွက်တရားဝင်အပြောင်းအလဲ%ထိုကွန်ဖရင်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်(2005 ခုနှစ်လုပ်ငန်းဥပဒေ)51 မှလျော့ချလိမ့်မည်%.ရှယ်ယာရှင်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်'အထွေထွေအစည်းအဝေးကအနည်းဆုံး 51 ကိုကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မယ်%ပစ္စုပ္ပန်အပေါငျးတို့သရှယ်ယာရှင်များ၏မဲစုစုပေါင်းအရေအတွက်၏(65 မှာ%2005 Corporate ဥပဒေ,အနည်းဆုံး 75%ဒီအစည်းအဝေး၏ကျမ်းစာ၌ရေးထားအမြင်).
ဤသည်ကို 2014 ခုနှစ်၏လုပ်ငန်းဥပဒေပုဒ်မ 10 ၌အသစ်ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်ပါသည်.လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားမဟုတ်,ဒါပေမဲ့တခြားသာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ,စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအချို့သောအမျိုးအစားအညီ,ကဲ့သို့:အဆစ်-စတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတွေက,ကန့်သတ်သည့်ကုမ္ပဏီများ... ...,ခြားနားချက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့် The 2014 ခုနှစ်လုပ်ငန်းဥပဒေပုဒ်မ 10 ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရကော်ပိုရိတ်အမြတ်အစွန်းများအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်,လူမှုရေးလုပ်ငန်းများသည်ဤပညတ်တရား၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီဥပဒေနှင့်အမှတ်ပုံတင်ပြီးနေကြတယ်.သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးပြဿနာတွေကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များ,အနည်းဆုံးအား 51 သုံးစွဲဖို့အကျိုးရှိသည်%မှတ်ပုံတင်ထားသောလူမှုရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် reinvest မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုစုပေါင်းနှစ်စဉ်အမြတ်အစွန်းများ.ကော်ပိုရိတ်လိုင်စင်နှင့် 2014 ခုနှစ်လုပ်ငန်းဥပဒေအရတာဝန်ဝတ္တရားများအပြင်,လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပုဒ်မ 10 အဘို့အပေးပိုင်ခွင့်နှင့်တာဝန်ရှိ(2)ထိုလုပ်ငန်းဥပဒေ.
10.အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လုပ်ငန်းများ 2014 ခုနှစ်လုပ်ငန်းဥပဒေအခန်း4မှာသတ်မှတ်ကြပါတယ်.2005 ကော်ပိုရေးရှင်းတရားမတူဘဲလုံးဝအသစ်ဖြစ်၏:
အမျိုးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အယူအဆအပိုဒ်4ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအပေါ်အခြေခံသည်,အပိုဒ် 8,2014 ခုနှစ်နှင့်ရှေ့တော်၌ထိုလုပ်ငန်းဥပဒေ.ယခင်ဥပဒေပြည်နယ်လုပ်ငန်းပြည်နယ် 50 ကျော်သည့်အတွက်ကုမ္ပဏီကြောင်းဖော်ပြထားသည်%မှတ်ပုံတင်ထားသောမြို့တော်,ဒါပေမယ့် 2014 ခုနှစ်လုပ်ငန်းဥပဒေပြည်နယ်လုပ်ငန်းပြည်နယ်ပေါင်း 100 ရှိကြောင်းဖော်ပြထားသည်%မှတ်ပုံတင်ထားမြို့တော်.ဒီအခန်းကစီးပွားရေးအုပ်စုတွေရဲ့ဥပဒေရေးရာ status ကိုရှငျး,မိဘကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်ပြဋ္ဌာန်းချက်-ခွဲများ၏ပုံစံ;လက်ဝါးကပ်တိုင်ရှယ်ယာကိုဝယ်ခြင်းငှါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တူညီတဲ့အုပ်စုထဲမှာခွဲများတားမြစ်-ပိုင်ဆိုင်မှု;ပွင့်လင်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကုမ္ပဏီအပိုဆောင်းဝေါဟာရများကိုကြားစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုမှ,ထိုကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်များထုတ်ဝေဖို့ Group ၏ဘုံစစ်ဆင်ရေးအဖြစ်....
2014 ခုနှစ်တွင်,စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပညတ်တရားတော်ကိုပေါင်းစည်းဖို့ကုမ္ပဏီ၏တူညီသောအမျိုးအစားမလိုအပ်ပါဘူး,ခှဲခွား,ခှဲခွား,နှင့်ရှင်းလင်းစွာအခွင့်အရေးကို define,တာဝန်ဝတ္တရား,တာဝန်ဝတ္တရား,လုပျထုံးလုပျနညျး,ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုင်တွယ်ဘို့လုပျထုံးလုပျနညျး.2005 Corporate ဥပဒေတူညီတဲ့အမျိုးအစားကိုသာကုမ္ပဏီများကပေါင်းစည်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစည်းနိုင်မှခွင့်ပြု.ဒါကအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုအချက်ဖြစ်ပါသည်,စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုန်သွယ်မှုစျေးကွက်၏အနာဂတ်မြှင့်တင်ရန်ကူညီတံ့သော.
လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၏ဆုတ်ခွာ:2014 ခုနှစ်၏လုပ်ငန်းဥပဒေပုဒ်မ 211 ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၏ပြန်လည်နာလန်ထူ၏5ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပုဒ်မ 165 ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ဆုတ်ခွာ၏ 8 အမှုများရှိ(2)2005 ခုနှစ်၏လုပ်ငန်းဥပဒေ.တချိန်တည်းမှာပင် 2014 ခုနှစ်လုပ်ငန်းဥပဒေလည်းပိုမိုလွယ်ကူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကူညီပေးသည်,ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့အလိုအလျှောက်ဖျက်သိမ်းမှတဆင့်စျေးကွက်ကနေဆုတ်ခွာဖို့စျေးနှုန်းချိုသာ.ထိုအခါ,ရက်စွဲ၏ 180 ရက်အတွင်း,ဖျက်သိမ်းဆုံးဖြတ်ချက်လက်ခံရရှိသည့် နေ့မှစ.,စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒါမှမဟုတ်ကျမ်းစာ၌ရေးထားထင်မြင်ချက်သို့မဟုတ်ဖိုင်ရဲ့ဖျက်သိမ်း၏ဖျက်သိမ်းဖို့ကန့်ကွက်၏ဖျက်သိမ်းမရှိအသိပေးစာ5အလုပ်လုပ်ရက်အတွင်းရှိ၏,အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြည်နယ်ကို update ၏အခြေခံပေါ်မှာအမျိုးသားရေးအချက်အလက်များ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ယူနစ်.
2014 ခုနှစ်၏လုပ်ငန်းဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ oriented ကြသည်,သောတည်ထောင်ခြင်းအကြံပြုခြင်း,အဖွဲ့အစည်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု,ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း,ဖျက်သိမ်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ,ဥပဒေနှင့်အညီလုပ်ငန်းများအခမဲ့ပေးဖို့,အလိုအတိုင်း,ကတိကဝတ်နဲ့သဘောတူညီချက်:ကန့်သတ်သည့်ကုမ္ပဏီများကိုခွင့်ပြုမှ,စတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတွေကတစ်ဦးသို့မဟုတ်အများအပြားဥပဒေများကိုကိုယ်စားလှယ်များရှိနိုင်ပါသည်;စတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတစ်ခုနှစ်ခုအဖွဲ့အစည်းများ၏တဦးတည်းရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြု,စီမံခန့်ခွဲမှုမော်ဒယ်တယောက်;စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ရွေးကောက်ပွဲသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီကခွင့်ပြုပါရန်'s ကိုစတော့ရှယ်ယာစစ်ဆေးရေးကော်မတီကိုသငျသညျမဲပေးမဲပေးသို့မဟုတ်မဖို့ရှေးခယျြနိုငျသောအခါ.
အခန်း၏အမျိုးသားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဖျက်သိမ်းဖို့ 2014 ခုနှစ်, ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေ,အဖှဲ့အစညျး၏စည်းကမ်းချက်များ၏အခနျး 10 မှပြောင်းလဲ,ကျင်းပ,ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဥပဒေနှင့်အညီအမျိုးသားရေးယူနစ်၏စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်ခဲ့,တာဝန်ဝတ္တရား,ခွင့်ပြုချက်,မမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပညတ်တရားတော်ကိုမှတ်တမ်းများအတွက်.
လာသောအခါလုပ်ငန်းအရေအတွက်ပညတ်တရားအခွန်အရေအတွက်ဖွစျလိမျ့မညျ,ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီသို့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း,သေးငယ်တဲ့ရှယ်ယာရှင်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအားကောင်းလာစေရန်(ခြောက်ခုများအတွက်ဆက်တိုက်လအတွင်းအနည်းဆုံး 10 ရှိ%ရှယ်ယာရှင်များ၏သာမန်ရှယ်ယာ,ရှယ်ယာရှင်များလုပ်နိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏နာမ၌တရားစွဲဆိုဖို့...).အနိမ့်၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များအကောင်အထည်ဖော်မှု၏အကောင်အထည်ဖော်မှု၏စည်းကမ်းချက်များကိုဖယ်ထုတ်ပါ,ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်5ရှိပါတယ်အဖြစ်%ရှယ်ယာရှင်များ၏မှတ်ပုံတင်များ၏မှတ်ပုံတင်ထားမြို့တော်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများ၏သက်ရောက်မှုကိုပယ်ဖျက်,ထိုကဲ့သို့သောပူးတွဲအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏တားမြစ်ချက်အဖြစ်-စတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတစ်ခုလာသောအခါမန်နေဂျာ(အထွေထွေမန်နေဂျာ)အခြားပူးတွဲအတွက်မဖွစျနိုငျ-စတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတွေလာသောအခါမန်နေဂျာမန်နေဂျာ).
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.vietnam-investment.com/my/vietnam-company-law-2.html